Indhacadde iyo Abu Mansuur oo la sheegay in ay gaareen Asmara iyo madaafiic lala dhacay dekedda Xamar iyo goobo kale oo ay ciidamada Itoobiyaanka ku soo jawaabeen madaafiic ay dad rayid ah ku dhinteen. Ruunkinet 15/02/07
Guddomiyihii hore ee gobolka Shabeelada Hoose Sheekh Yuusuf Indhacadde iyo Abuu Mansuur oo sarkaal sare ka ahaa midowga maxaakiimtii laga xoogga roonaaday ayaa la sheegay in ay dhawaan tageen magalada Asmara ee dalka Itoobiya.
Mas'uuliyiintan oo la sheegay in ay horey u aadeen dalka Sacuudiga ayaa wararka qaar sheegayaan in si weyn loogu soo dhaweeyay dalka Eritereya.
Dhanka kale, waxaa maanta madaafiic is daba joog ah lagu weeraray dekedda weyn ee magaalada Muqdisho.
Madaafiicdan oo la sheegay in ay wax yeelo u geysatay goobtaasi ayaa ciimada Itoobiya ee ku sugan Dekedda iyo meelo kale ay ugu jawaabeen madaafiic aan meelna loo deyin oo lala beegsaday goobo ay ku badan yihiin dad rayid ah oo joogay degaanka Bakaaraha.
Madaafiicda ciidamada Itoobiya ayaa la sheegay in ay ku naf waayeen ilaa iyo 5 ruux oo rayid ah halka ay ku dhaawacmeen qaar kale.
Sidoo kale, ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda ee taageersan madaxweyne Yuusuf ayaa la sheegay in ay maanta billaabeen baarintaan ay ku sameynayaa dadka saaray gawaarida rakaabka ah ee loo yaqaan BL-ka.
Ciidamada Itoobiya ayaa la sheegay in ay maanta ku sugnaayeen isgoysyo badan oo ka tirsan magaalada Muqdisho.